Fivorian�ny SADC Tsy nanan-kambara afa-tsy rivodoza ny Filoha Malagasy
Andry Rajoelina Manilika ireo ekipa taloha
Misy mahatsiaro tena voailika sy somary ataon-dRajoelina ambanin-javatra ireo ekipany fahiny tao anatin’ny tetezamita, indrindra indrindra ireo nanampy azy tamin’ny fanonganam-panjakana ka nahatonga azy ho Filohan’ny tetezamita tamin’ny taona 2009.
Norbert Lala Ratsirahonana Tsy fantatra indray izy ho tohanany…
Tsy mbola niteny aloha fa mody nipoipoitra tetsy sy teroa fotsiny. Ny mpanara-baovao kosa anefa etsy ankilany miandry izay higadonany, hoy ny fitenenana, ary dia hanongilan-tsofina tsy ho ela hihaino indray izay hametrahan’ny filohan’ny antoko Asa vita no hifampitsarana na ny AVI, Norbert Lala Ratsirahonana, indray.
Antoko tsy manan-katolotra Hanohana an-dRavalo sy Rajoelina
Hatreto, raha ny fanadihadiana sy ny tombatombana taratra amin’ny valintenin’ireo antoko na vondrona politika heverina ho salantsalany na madinika mihitsy aza ny sasany mikasika ny mety ho tohanan’izy ireo amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena amin’ity taona ity dia tsy hita tabilao loatra ny antokon’ny fitondrana na ny Hery vaovao ho an’i Madagasikara.
Kandida ho filoha Tokony hamoaka vina avokoa, hoy ny antoko Maitso
Mikorontana ny tontolo politika ankehitriny. Tsy fantatra intsony hoe iza no manohana an’iza, hoy ny filohan’ny antoko politika Maitso, Georget Alexandre, raha naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny zava-misy ankehitriny teny amin’ny biraony eny Ambohitsoa omaly.
Lalàna mifehy ny antoko politika Fototry ny olana eto Madagasikara
Hatramin’izay mihitsy no tsy mety nazava ary toy ireny niniana tsy nazavaina ireny ny lalàna mifehy ny antoko politika eto Madagasikara.
Fitondrana HVM Nanaiky fitsirihana sy fitrandrahana solika maro be
Amin’ireo Blocs pétroliers 100 eny amin’ny ranomasina izay ananantsika dia 40 amin’ireo no nanaovana « appel d’offres » amin’ity taona 2018 ity. Ny 36 kosa efa namoahana didim-panjakana ny amin’ny fanomezan-dalana hitrandraka azy tamin’ny alalan’ny OMNIS ny taona 2017 ka anisan’izany Mahajanga avaratra sy atsimo, Cap Saint André ary Ampasindava.
Fampandrosoana ara-toekarena Manadala ny Malagasy Rajoelina
Mbola mahatonga adihevitra eny rehetra eny ilay vina Initiative Emergence Madagascar nataon’ingahy Andry Rajoelina hatramin’izao.
Nandray anjara tamin�ny fivoriana tsy ara-potoan�ny vondrona SADC tany Swaziland ny sabotsy 18 martsa lasa teo ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Tamin’ireo lohahevitra lehibe 5 antom-pisian’ny fivoriana dia teboka iray ihany no tena nasongadin’ny filoha Malagasy nandritra ny lahateniny dia ny fisaorana sy fankatelemana ny SADC tamin’ny fanohanana sy fanampiana an’i Madagasikara noho ny fandalovan’ny rivodoza Enawo. Tafiditra ao anatin’ilay lohahevitra mahakasika ny fiovaovan’ny toetry ny andro moa izy io. Tena ilaina ary zava-dehibe tokoa ny fahafahana mandritra ny fomba fiasa amin’ny fiatrehana ireo loza voajanahary, hoy izy. Nasongadin’ny filoham-pirenena fa nahafahana nampihena ny aina nafoy ny fananan’i Madagasikara fandaharanasa fiomanana amin’ny fiatrehana rivodoza. Na izany aza, namela takaitra ho an’ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an’ny firenena Malagasy ny rivodoza Enawo. Manantena hatrany ny fifanomezan-tanana eo amin’ireo firenena mpikambana ao amin’ny SADC ny filoha mba hiatrehana ny loza voajanahary mety hahazo ny firenena tsirairay avy. Tsy dia nasian’i Hery Rajaonarimampianina resaka ny lohahevitra 4 hafa izay tena anton’ny fivoriana tsy ara-potoana tao amin’ny Lapan’ny Mpanjakan’i Swaziland tao Lozitha, dia ny fampiroboroboana ny indostria, ny krizy politika ao Lesotho sy any amin’ny repoblika demokratikan’i Congo ary ny fananganana ilay Oniversiten’ny SADC izay handray mpianatra 300 isan-taona ka manana anjara toerana 20 mahery ao anatin’izany i Madagasikara.Taorian’ny fihaonana tany Swaziland moa dia nitodi-doha atsy amin’ny nosy Maorisy indray nanomboka omaly alahady ny Filoha Malagasy mba hanatrika ny fivoriana ara-toekarena iray lehibe handinihana indrindra ny ho avin’i Afrika, manomboka anio alatsinainy io fivoriana io.